Turkiga oo dayax-gacmeed u diraya Hawada | Berberanews.com
Home WARARKA Turkiga oo dayax-gacmeed u diraya Hawada
Turkiga oo dayax-gacmeed u diraya Hawada
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaaca ka qaaday qorshe uu dalkiisa markii ugu horreysay hawada ugu dirayo dayax gacmeed.
Wuxuu sheegay in sanadka 2023-ka ay dhaqan gelinayaan qorshahan oo ay cirbixiyeeno ugu dirayaan dayaxa xilliggaas oo loo dabbaal degayo 100 sano guuradii kasoo wareegtay markii la aasaasay jamhuuriyadda Turkiga.
Erdogan wuxuu sidoo kale sheegay in qorshaha hirgelintiisa ay ka caawin doonaan dalal caalami ah oo ay saaxibo yihiin.
“Hadafkeenu ugu muhiimsan wuxuu yahay in cirbixiyeenadeena ay gaadhi doonaan hawada xilli la xusayi munaasabadda sanad guurada 100-aad, hadduu Alle idmo waxaan gaadhi doonaa dayaxa” ayuu yidhi Erdogan.
Wuxuu dhanka kale sheegay in hadafka Turkiga uu cirbixiyeenada ugu diraya daxaya ay tahay in dalal kale la iska kaashado xoojinta teknooloojiyadda dhanka Satellite-ka ee hawada.
“Waxaan ku rajo wenahay in qorshahan uu Turkiga u horseedi doono in kaalmaha hore uu ka galo tartamada caalamiga ah ee dhanka hawada, wuxuuna noqon doona mid lagu guuleysto” ayuu madaxweynaha, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee AP.
Hadalka kasoo baxay madaxweynaha Turkiga waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay warbaahinta dalkaas, wargeyska ay leeyihiin mucaaradka ayaa sheegay in madaxweynaha laga doonayay in uu diiradda saaro taakuleynta dadka tabaaleysan intii uu ku dadaali lahaa dayax gacmeed hawada loo diro.
Previous articleBeesha caalamka oo soo dhawaysay doorashooyinka Somaliland
Next articleAbwaan Xasan Dhuxul oo madal weyn ku soo bandhigay Musharraxnimadiisa Baarlamanka